बेड भन्दा स्टेज सहज–डोल्मा शेर्पा, एमसी - Enepalese.com
बेड भन्दा स्टेज सहज–डोल्मा शेर्पा, एमसी
इनेप्लिज २०७२ असार १५ गते १४:२६ मा प्रकाशित
यूवापूस्ताको मनको ढुकढुकी बनेकी उद्घोषक हुन् डोल्मा शेर्पा । साना स्टेज सोदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रममा हिजोआज डोल्माको माग बढ्दो छ । सोलुखुम्बु सल्लेरीमा जन्मेर काठमाडौं कर्मथलो बनाएकी डोल्मा चर्चाको शिखरमा पुग्नुका पछाडि थुप्रै संघर्ष र प्रतिभा रहेका छन् । नेपालको एउटा ख्यातिप्राप्त मिडीयाकर्मी बन्ने सपना बोकेर निरन्तर लागिपरेकी डोल्मा शेर्पासँग जनार्जन पौडेलले गरेको कुराकानीः
यतिबेला देशमा ठूलो विपत्ति आइलागेको छ । यो संकटको घडीमा एउटा कलाकारको भएको नाताले भुकम्पपीडितहरुको सहयोगका निम्ति आयोजित बिभिन्न च्यारिटी शोहरु र बालमैत्री सांगीतिक यात्राहरुमा ब्यस्त छु ।
कति भयो मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ?
पूर्णकालीन रुपमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको दुई बर्ष भयो । तर त्यस भन्दा अघिदेखि नै स–साना कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेको हुन्थें । म सानोमा स्कुलमा हुने कार्यक्रमहरुमा भाग लिन्थे अनि स्टेजमा गइ दुइ चार शब्द बोल्थे, कहिले नाची पनि दिन्थे । यस्ता स्कुलमा हुने प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरुमा आमा दर्शक बनेर कार्यक्रम हेर्न आउनु हुन्थ्यो । अनि आमालाई खुशी बनाउन, आमाको धेरै माया पाउन डर जवरजस्ती स्टेजमा गएर बोल्ने प्रयास गर्थें । बिस्तारै बोल्न एकदम सहज लाग्न थाल्यो । आमाको त्यहि हौसला र मायाले आज स्टेज आफ्नो बेड भन्दा बढी सहज लाग्छ ।
को सँग बढी जमघट हुन्छ कार्यक्रममा ?
कामको क्रममा दिनहुँ जसो नै कलाकार, समाजसेवी, राजनीतिज्ञसँग भेट हुन्छ । मलाई आफु एकदमै भाग्यमानी रहेछु भन्ने महसुस हुन्छ किनकि बाल्यकालमा जुन कलाकारहरुका चलचित्र हेरिन्थ्यो, जसका गीत सुनिन्थ्यो, आज उहाँहरुसंगै एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने मौका पाएको छु ।
हालसम्म स्टेज कार्यक्रमको दौरानमा कहाँ कहाँ पुग्नुभयो ?
धेरै जिल्लाहरुमा कार्यक्रम संचालन गरिसके । एउटा कलाकारलाई माया र साथको खाँचो हुन्छ । सबैतिर पुग्दा धेरैले माया दर्शाउनु भएको छ ।
रंगिन पर्दामा आउन चाहने कलाकारहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
नयाँ आउने कलाकारहरुलाई कला क्षेत्रमा धेरै रुचि छ र कलाकारिता प्रस्तुत गर्न सक्ने दक्षता छ भने मात्र प्रवेश गर्नु होला भन्न चाहन्छु । अरुले कुनै काममा सफलता प्राप्त गरेको देख्दैमा लोभीएर त्यही क्षेत्रमा जवर्जस्ती प्रवेश गरेर हुन्न आफु भित्रको क्षमता प्रयोग नगरी अरुले के गरे, अरु के गर्दा सफल भए भन्ने कुरालाई मात्र मध्यनजर नगरी जबर्जस्ती त्यही काममा हाम फाल्नु धेरै गलत हो ।
यो स्थानमा आउनको लागि कति मेहनेत गर्नु भयो ?
मलाई सानैदेखि स्टेजमा बोल्न धेरै मन पथ्र्यो । त्यसैले मैले आफ्नो खुसीको लागि पनि कार्यक्रम सञ्चालिका बन्नै पर्ने थियो तर सुरुवातमा त न म कसैलाई चिन्थे, न कसैले मलाई चिन्थ्यो । आफ्नो परिवार, नातेदार कोही थिएन यो क्षेत्रमा । तर जसो तसो बाटो पहिलाएरै छाडे । एक दुइ जनाले बोल्ने अवसर दिए अनि मैले त्यो अवसरको साह्रै होसियारीपूर्वक प्रयोग गरे । एकदम मिहेनत गरेर, भोलि के बोल्ने भन्ने बारे रात भर ट्राइ गर्थे । बिषय बस्तु सम्बन्धी अध्ययन गरेर कार्यक्रम संचालन गरे । सबैले खुबै प्रशंसा गर्न थाले । त्यसपश्चात २ महिना पनि नबित्दै मलाइ आयोजकहरुले आफै बोलाउन थाले ।
तपाई राम्री पनि हुनुहुन्छ, देशविदेश घुम्नुहुन्छ, प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछ ?
हा हा, प्रेम प्रस्ताब आजकल खाासै आउदैन । बरु पहिले पहिले स्कुल, कलेज पढ्दा आउथ्यो । अहिले कामकै पछि दौडिरहेपछि प्रेम प्रस्तावको पनि वास्तै नहुने रहेछ । फेसबुकमा ‘आइ लभ यु’ भनेर मेसेज लेख्ने र कमेन्ट गर्ने टन्नै छन् । मेला महोत्सव चलाएको ठाउँमा पनि आइ लभ यू त भन्छन धेरै दर्शकहरुले तर त्यसलाई म प्रेम प्रस्ताब भनेर बुझ्दिनँ । त्यो त सिर्फ उहाँहरुको कलाकार प्रतिको माया हो । हामी जस्तो व्यस्त भइरहने मान्छेले प्रेम गरेपछि समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ र जहाँ समय दिन सकिन्न त्यहाँ प्रेम फस्टाउदैन । म मेरै लाखौ सुन्दर सपनाहरुसँग गहिरो प्रेममा छु । मेरा सपनाहरु पुरा भएपश्चात मात्र सपनाको राजकुमार खोजौला । अनि उसँग प्रेम पनि गर्नेछु र प्रेम मात्र होइन विवाह पनि गर्नेछु ।
तपाई कस्तो राजकुमारको खोजीमा हुनुहुन्छ ?
अहिले त्यो सोच त बनाएकी छैन । तर भन्नैपर्दा मेरो काम र पेशालाई निरन्तरताको निम्ति सहयोग र साथ दिने साथी नैे मनपर्छ । किनकी धेरै पढेका मानिसहरु विवेकशील हुन्छन, बुद्धिमानी पनि हुन्छन र त्यसपछि हुनु पर्ने गुणहरु भनेको स्मार्ट हुनु पर्छ , आकर्षक देखिनु पर्छ अनि लक्षवान हुनु पर्छ । सकारात्मक सोच राख्ने हुनु पर्छ र परिवार प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्ने हुनु पर्छ, अनि मायालु र दयालु, मिलनसार हुनु पर्छ र सफल हुनु चाहि सबभन्दा धेरै जरुरी छ ।
माया प्रेम र सेक्सको बारेमा तपाईको बुझाइ र विचार ?
मायाको परिभाषा म शब्दमा दिनै सक्दिन, माया अति आवश्यक कुरा हो । संसारका सबै जीवित प्राणीहरु मायाका भोगी हुन्छन र मायाले जीवन सार्थक तुल्याउछ । हामी मानव जातिहरु जीवनको प्रत्यक घडीमा मायाकै सहारा लिन्छौ र मायाकै कारणले हाम्रो जीवनले पुर्णता पाउछ । प्रेम बिना जीवन अधुरो र अपुरो रहन्छ अनि रह्यो सेक्सको कुरा सेक्स आवश्यकता हो, यो प्रजननको माध्यम हो तर उचित समय र स्थानमा मात्र यसको सदुपयोग हुनुपर्छ ।
एभरेस्ट टाइम बाट